३३ किलो सुन प्रकरण– प्रहरी अधिकृतदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म अनुसन्धानको घेरामा ! - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७५ वैशाख ५ गते १५:२४
काठमाडौं । माघ ७ मा काठमाडौं भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन गायब भएको प्रकरण झनपछि झन रहस्यमय बन्न थालेको छ । यो घटनासँग जोडिएका तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ भने केही सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् ।
यही प्रकरणमा उर्लावारी मोरङका भरिया भनिएका सनम शाक्य, नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी प्रेमराज चौधरीको मृत्यु भएको छ भने अर्का एकजनाको मृत्युलाई पनि यसैसँग जोडेर हेरिएको छ । तर यही घटनाका कारण हो वा अन्य भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
३३ किलो सुन प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो खस्ने संकेत देखिएको अनुसन्धानमा सघाउँदै आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सह–सचिव ईश्वरचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वको छानबिन समितिले अहिलेसम्म ३० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ । पक्राउ परेकामध्ये कतिपयलार्ई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पठाइएको छ भने कतिपय काठमाडौंमै छन् ।
काठमाडौंमा रहेकाहरुलाई पनि मोरङमै बुझाइने र आफुहरु अब मुद्दा दायर गर्ने अवस्थाको नजिक पुगेको समितिमा रहेका एसएसपी वसन्त लामाले बताए । लामाले भने, “हामी सबै कुरा मोरङ प्रहरीको जिम्मा लगाइरहेका छौं । केही दिनमै मुद्दा दायर होला । अहिले पनि हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौं ।”
सुनका मालिक भनिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ फरार रहेको टोलीले निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार यो प्रकरणसँग अन्य सुनकान्ड पनि जोडेर अनुसन्धान भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार पुरानो सुन प्रकरणमा प्रहरीका केही पूर्व अधिकृत, भन्सारका अधिकारी, चर्चित व्यापारी र पूर्वमन्त्रीसम्मको मिलेमतो रहेको आशंका गरेको छ । नेपालमा सुनको कारोबार र केही वर्षअघिदेखिका घटना नजिकबाट अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर अनुसन्धानको घेरामा रहेकाले कसैको पनि नाम बताउन नमिल्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
को –को परे पक्राउ ?
युएईबाट ल्याएको भनिएको तस्करीको ३३ किलो सुन काठमाडौंबाट विराटनगर लैजाने क्रममा गत हराएको हो । त्यही हराएको सुन भरिया सनम शाक्यमार्फत लगिएको र पछि हराएको भन्दै शाक्यको हत्या भएको थियो । शाक्यको हत्यापछि यो घटना थप रहस्यमय बनेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
फागुन १९ मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले धरानमा शाक्यको शव फेला पारेको थियो । त्यो हत्यामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र टेकराज मल्ल ठकुरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
शाक्यको हत्यामै सहयोगी भूमिका खेल्ने लाक्पा शेर्पा र मदन घिमिरेसमेत मोरङ प्रहरीको हिरासतमा छन् । यस्तै ३३ किलो सुन प्रकरणमै पक्राउ परेका अर्का व्यक्ति हुन् भुजुङ गुरुङ । स्रोतका अनुसार गुरुङले नै विमानस्थलमा सुन तस्करीको सेटिङ मिलाउने गरेका थिए । भारतीय व्यापारी महावीर गोल्यानसहित प्रहरीले बालकृष्ण श्रेष्ठ, कपिलराज पुरी, गोपालकुमार श्रेष्ठ, दोराम खत्री, सम्बिरप्रसाद तोलाङे, हेमन्त गौतम, पुण्यप्रसाद लामा, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजन थापा, लालबहादुर मगर, राजु महर्जन, आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य र जय मातादी गोल्ड प्यालेसका पवन अग्रवाल पनि पक्राउ परेका छन् ।
अनुसन्धान टोलीले बाजेको सेकुवाका सञ्चालक चेतन भण्डारीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । स्रोतका अनुसार उनको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । भण्डारी सुन तस्कर गोरेसँग नजिकका व्यक्ति रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
नाताले भाञ्जा र सुनमा लगानीकर्ता भएको बताइन्छ । एकजना प्रहरी अधिकारी भन्छन्–यो तस्करीमा भण्डारी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभई उप्रेतीलाई तस्करीका लागि लगानी गरेको देखिन्छ ।